ငြိမ်းချမ်းအောင် ● အပေါ်ယံတွေ သိပ်များတယ် | MoeMaKa Burmese News & Media
ကိုသန်းလွင် ● ရေနံဈေး
မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) - နောက်ဆုံးအပြီးသတ် အဖြေတခု
မင်းကောင်းချစ် - ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု - ဥပဒေစည်းကမ်း၊ လေနဲ့ဝမ်း ကွဲစေဖို့
ခိုင်ကြည်သစ် - အသက်ရာကျော်ရှည်စေကြောင်းရယ်နဲ့
စုစုကို ဦးလေးစိတ်ချလက်ချ ထားခဲ့တာလား
မြန်မာသည် အာရှဦးဆောင်နိုင်ငံလားနှင့် မောင်မိုးသူ
တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း - ပင်ဒိုးရား၏ သေတ္တာ
မောင်ရင်ငတေ - ပါရီပုံရိပ်များ
မောင်စွမ်းရည် ● ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသော စစ်သားကြီး
ကိုဂျေ ● ဒါ တို့ချစ်တဲ့ တင်မိုး
နောက် အချိန်ဇယားပါ။ ကလေးတွေကို မိနစ် ၄၀ လောက် စာသင်ပြီးတာနဲ့ ၁၀ – ၁၅ မိနစ် မဖြစ်မနေ အခန်းထဲက ထွက်ခိုင်း ပါတယ်။ မဆော့ချင်တဲ့ကလေးလည်း စာသင်ခန်းအပြင်က သန့်ရှင်းကောင်းမွန်တဲ့လေကို ရှူရှိုက်ရပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● ပြည်သူ့စစ်သား (0)
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● ကျောင်း (0)
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● အနော်ရထာခေတ်ကို ပြန်ရောက်သွားတဲ့ တိုင်းပြည် (0)
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● သမီးရေ …. ဆာမဲ လူမျိုးစုအကြောင်း (ဖင်လန်နိုင်ငံ) (0)
ငြိမ်းချမ်းအောင် ● သမီးရေ …. (0)